Caqli ahaan: Sidee Wikipedia u dhiirrigeliyaa barashada aqoonta
Wikipedia waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay ilaha ugu muhiimsan ee macluumaadka faa'iido leh ee internetka. Waagii hore, macallimiinta iyo culimada ayaa u aqoonsaday Wikipedia in ay yihiin goob ay ku socdaan halkaa oo warar iyo warar been ah lagu faafiyo. Waqtigaas, fikirkan ayaa isbeddelay, isagoo tixgelinaya qawaaniinta loo dejiyey iyo heerarka hubiya dhammaan macluumaadka ka hor intaan lagu soo rogin Wikipedia - deposito okpay casinos.
Ka sokow, macluumaadka aan saxda ahayn iyo marin-habaabinta waxaa si dhaqso ah u habeeyay tifaftirayaal dhamaystiran kuwaas oo u gooni ah oo u heellan in ay Wiki u noqdaan meel ka fiican ardayda. Dadka intooda badan waxay booqdaan Wikipedia oo raadinaya sharraxaad mawduucyo muran ah.
Julia Vashneva, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegay in Wikipedia uu ku maamulayo xeerar, siyaasado, iyo heerar la taaban karo. Bulshada Wikipedia ma ogolaato soo dajinta maqaal la'aan iyadoon wax qorin. Wiki waxay dhiirrigelisaa ardayda, macalimiinta, iyo dhammaanba tacliinta waxbarashada si ay u abuuraan waxyaabo cusub oo ay ku jiraan Wikipedia, iyada oo maskaxda ku haysa in shaqadooda ay wargelinayso dadweynaha guud ee raadinaya maqaallo wanaagsan.
Sannadihii ugu danbeeyay, Wikipedia ayaa ka caawiyay macalimiinta inay abuuraan barnaamijka Wiki-ka ah, taas oo ah fududeynta araajida dhabta ah mawduucyada laga barto fasalka..Waqtigaan, waxaa jira in ka badan 120 mashruuc waxbarasho oo sare ee Wikipedia. Jon Beasley, oo ah borofisar ka tirsan Jaamacadda Columbia, ayaa ahaa aqoonyahankii ugu horeeyay ee ku dhiirigeliya ardayda inay abuuraan maqaal loogu talagalay Wikipedia, inta badan diiradda saara suugaanta
Si ay ula kulmaan dhammaan heerarka Wikipedia iyo siyaasadaha, Professor Beasley ayaa ku amray ardaydiisa inuu la xiriiro kooxda taageerada Wikipedia ka hor inta aan la soo dhajin content, si uu u helo tilmaamo dheeraad ah. Xaaladahan kiiskan waxay siisay ardayda fahamka qoto dheer ee ku saabsan sida Wikipedia u shaqeynayo iyo qaabka loo baahan yahay marka la abuurayo maqaalo si loogu gudbiyo Wikipedia.
Abuuritaan maqaal ah oo lagu soo saari doono Wikipedia ma aha mid sahlan. Barashada iyo fahamka qaabka wiki waa midka ugu muhiimsan ee looga fogaado tirtiridda maqaalkaaga. Dib-u-eegis iyo qodobbo caddaynaya in ka badan laba jeer ayaa ku doodaya tifaftireyaasha iskaa wax u qabso. Ku darida waxyaabo dheeraad ah marinada hadda jira waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay hawl fudud oo loogu talagalay ardayda marka la barbardhigo soo saarida waxyaabaha cusub. Tani waxay ka caawisaa ardayda inay bartaan xirfadaha wax qabadkooda iyo waayo-aragnimo dheeraad ah oo ku saabsan maqaalka caddaynta. Ardayda waxaa lagula taliyaa macalimiinta mashruuca inay ka shaqeeyaan kooxo si ay u helaan natiijooyin sax ah
Wacyigelintu waa meel ay ugu horreysay ka qaybgasho horumarka hay'adaha sare ee waxbarashada. Wicitaanku wuxuu u fasaxayaa ardayda inay u gudbiyaan waxyaabaha ay ka dhigan yihiin ardayda kale si ay u helaan iyo wax u bartaan. Macallimiintu waxay mas'uul ka yihiin abuuritaanka Wiki Course, maadooyinka koorsooyinka koorsooyinka, qorshooyinka casharrada, iyo macluumaad dheeraad ah oo munaasib ah oo looga baahan yahay ardayda marka ay qorsheynayaan mashaariicdooda
Koorsada Wiki waxay ardayda siisaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan kooras gaar ah horay. Waqtiga fog, ardaydu waxay helaan waqti dheer si ay u go'aamiyaan in ay qaataan koorso gaar ah ama aan. Boggaga Wargalinta waxay ardayda siiyaan meel ay si dhakhso ah ugu daraan oo u saxaan waxyaabaha kooban ee koorsada. Inta badan, ardaydu waxay isticmaalaan boggaga Wikileaks si ay ugu dhajiyaan mashaariicda lagu barto inta lagu guda jiray fadhiga, iyaga oo ku daraya ilo macquul ah, iyo soo-jeedin maaddooyinka waxtarka leh